रूपा खड्का बिहीबार, भाद्र १० २०७८
नेकपा एमाले पार्टी भित्रको विवादमा माधव नेपालको साथमा खुलेर लागेका यी दुबै नेताले ओलीको कटु आलोचना गर्न पछि परेनन् । तर आज तिनै ओलीको कृपादृष्टिमा पाहुना मुख्यमन्त्री बन्न हतारिए । अल्पमतमा पर्ने जान्दाजान्दै पनि ओलीले किन मुख्यमन्त्री बनाए ?
काठमाडौं । बिहिबार प्रदेश नं १ को सरकारमा ठुलो फेरबदल भयो । एकल बहुमतमा सरकार चलाइरहेको नेकपा एमालेका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले अचानक राजिनामा दिए । र अर्का नेता भीम आचार्य मुख्यमन्त्रीमा सपथ खाएर आजै पदभार पनि सम्हालेका छन् ।
चार वर्षसम्म प्रदेशको नामाकरण समेत गर्न नसकेका निवर्तमान मुख्यमन्त्री राईले बिहिबार अचानक राजिनामा दिए । प्रदेश बनेदेखि नै मुख्यमन्त्रीमा आँखा लगाइराखेका आर्चायले राईलाई हटाउन पटक पटक प्रयास गरे तर सकेन । तर आज आचार्य एकाएक किन र कसरी मुख्यमन्त्री भन्ने कौतुहलता सबैमा छ । भीम आचार्यको प्रयास वा राईले छोड्नुलेमात्र उनी मुख्यमन्त्री भने बनेका होइनन् । नेकपा एमालेको केन्द्रमा भएको उथलपुथलले यो सबै सम्भव भएको हो । बुधबारमात्र माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा नेकपा(एकिकृत समाजवादी) दलले मान्यता पाएको छ ।
यो दल दर्ता हुना साथ प्रदेश एक को सरकार अल्पमतमा पर्ने पक्का छ । नेकपा एमालेको विवाद चरमउत्कर्षमा पुग्दा माधव नेपाललाई साथ दिएका आचार्य एकाएक फेरि ओली तिरै ढल्किएपछि प्रदेश १ मा एमाले सरकार जोगाउने प्रयास स्वरुप आज आचार्य मुख्यमन्त्री बनाइएको प्रष्ट छ । स्वयम् राईले पनि पार्टी एकता जोगाउन भीम आचार्य कमरेडलाई दलको नेता चयन गरेको बताएका छन् ।
तर आचार्यका लागि पहिलो चुनौती नै सरकारका पक्षमा संसदमा विश्वासको मत पाउने रहेको छ । प्रदेश सभामा एमालेका ५१, कांग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, जनता समाजवादी पार्टीका ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १र१जना सांसद छन्। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा अहिले कायम रहेका ९२ मध्ये बहुमतको लागि ४७ जनाको समर्थन आवश्यक पर्छ। माधव नेपाल समूहका १८ जनामध्ये आचार्यसहितका ८ जनाले एमाले रोज्ने निर्णय गरेका छन्। बाँकी १० जनाले कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । आचार्यलाई दलको नेता चयन गर्न आयोजित बैठकमा भौतिक रूपमा २४ जनाको उपस्थिति थियो। प्रदेश सभाको एमाले संसदीय दलमा ५१ सदस्य छन्।
अब नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा ५ सांसद प्रवेश गरे अहिलेको सरकार ढल्नेछ । दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेशअनुसार २१ दिनभित्र प्रदेश सभाका सदस्यले नयाँ पार्टी रोज्न पाउने छन्। अबको २१ दिनमा आचार्यले बहुमत पुर्याउन ठुलै कसरत गर्नुपर्छ । तर सम्भव भने न्यून नै छ ।
उता बागमति प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्य पनि अल्पमतमा परेकि छिन् । माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) एमालेका दुई सांसद लागेपछि अष्टलक्ष्मी शाक्यको नेतृत्वमा बनेको वागमती सरकार अल्पमतमा परेको हो । सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल र प्रदेश सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे एकीकृत समाजवादीमा लागेपछि एमाले नेतृत्वको सरकार एकसातामै संकटमा परेको हो । वागमती प्रदेशसभामा १ सय ९ सांसद छन् । जसमध्ये एमालेका ५६ जना सांसद थिए । दुई जना एकीकृत समाजवादीमा लागेपछि एमालेका ५४ सांसद भएका छन् । र, बहुमतका लागि ५५ सांसद चाहिन्छ । दुई सांसदले साथ नदिनेबित्तिकै शाक्यको सरकार अल्पमतमा पर्नेछ ।
नेकपा एमाले पार्टी भित्रको विवादमा माधव नेपालको साथमा खुलेर लागेका यी दुबै नेताले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कटु आलोचना गर्न पछि परेनन् । तर आज तिनै ओलीको कृपादृष्टिमा पाहुना मुख्यमन्त्री बन्न हतारिए । अल्पमतमा पर्ने जान्दाजान्दै पनि ओलीले किन मुख्यमन्त्री बनाए ? यसरी मुख्यमन्त्री बनाउनु नै थियो भने पहिले मरिहत्ते गर्दा किन बनाएनन् ? अहिले किन बनाए ? के उनीहरुले अब माधव छोडेर आएकोले हो ? वा ओली माधवको साथ दिनेलाई छड्के नजरले पनि हेर्ननसक्ने भएर पहिले नबनाएको ? जे होस एक महिने पाहुना मुख्यमन्त्री बनेर भएपनि भविष्यमा पूर्वमुख्यमन्त्रीको प्रोफाइल बनाउन यी दुबै नेता लालायित भएका देखिन्छन् ।
जीवन भण्डारी १ महिना अगाडी